LinkedIn na-enyere mmelite ọkwa ọkwa ụlọ ọrụ aka | Martech Zone
LinkedIn na-enyere mmelite ọkwa nke ụlọ ọrụ aka
Tọzdee, Ọktoba 13, 2011 Sunday, Jenụwarị 15, 2017 Douglas Karr
Otu n'ime ihe ndị m na-ebe ákwá kemgbe ọtụtụ afọ bụ na a na-eji ngwa onye ọ bụla eburu ngwa mgbasa ozi ọha na eze ma ọ bụghị mgbe ọ bụla a na-achịkwa azụmahịa. Azụmaahịa abụrụla echiche nke abụọ dịka ngwa ngwa mgbasa ozi na-arụ ọrụ na mmiri ha na-enweta.
Obi dị m ụtọ, LinkedIn agbapụla egbe mbụ ma mee ka ndị mmadụ nwee ụlọ ọrụ imelite a ọnọdụ ụlọ ọrụ, kama ịbụ otu onye. Ugbu a ị nwere ike ịgbaso ụlọ ọrụ karịa mmadụ ma hụ mmelite sitere na ụlọ ọrụ ahụ! Nke a bụ nnukwu nkewa (na nke m chọrọ ka Twitter ga-enyere).
Otu ihe edetu, ka nke a wee rụọ ọrụ, ịkwesịrị nwee ndepụta Admin na ibe nkọwa ụlọ ọrụ gị. Nke ahụ bụ igodo! M gbakwunye Jenn Lisak si DK Ọhụrụa ma chere na m ga-abụ onye nchịkwa na akpaghị aka. Nope… ugbu a akpọchiri m nke imelite ụlọ ọrụ nke m!
Nsonye ntuli aka: Kedu otu nchekwube anyị nwere banyere Apple?
Argyle Social: Ntughari mgbanwe na Social Media
Ọkt 14, 2011 na 6:46 AM
Daalụ - ezigbo mmelite-melite!